Ahoana ny fitsikilovana WhatsApp amin'ny 2021 - Ireo fomba rehetra misy | Androidsis
Ignacio Sala | | Fampiharana Android, fiarovana, Tutorials, WhatsApp
Hanomboka hilaza aminao fa amin'ity lahatsoratra ity dia nohazavaiko ny fomba fitsikilovana WhatsApp, dia post oriented to fampiasana kaonty WhatsApp amin'ny fantsona roa na maromaro miaraka amin'izay, fiasa iray izay tsy mamela ny WhatsApp ho azy raha tsy hoe te-hanokatra ny kaontinay amin'ny kinova web desktop amin'ny alàlan'ny solosaina manokana izahay na inona na inona ny rafitra miasa napetraka.
Miorina amin'ity fahafaha-mampiasa ny rindranasa WhatsApp Web ity dia nampiasa ny tombony omen'ny WhatsApp Web antsika ny fampiharana azy amin'ny fampiharana iray mamitaka WhatsApp amin'ny fieritreretana fa mampiasa solo-sainantsika manokana izahay. Izany dia hanampy antsika ho afaka hitondra ny kaonty WhatSapp mitovy amin'ny terminal roa samy hafa miaraka amin'ny fotoana tsy mila fanafoanana ny iray hanamafisana iray hafa tahaka izay tsy maintsy ataontsika mandraka ankehitriny, na koa, ho an'ny tsy fahampiana eritreritra sy miaraka fikasana maizina kokoa, afaka miditra amin'ny WhatsApp an'ny sakaizantsika, ny sakaizantsika akaiky na izay tiantsika ary ny fahalalantsika ara-pitondrantena dia mamela antsika, miaraka amin'ny fepetra tokana ahafahantsika manana fidirana amin'ny terminal an'ny olona tadiavintsika hitsikilo, farafahakeliny XNUMX segondra ilaina mba hanokafana ny WhatsApp, kitiho ny safidin'ny WhatsApp ary zahao ny QR kaody izay Miseho eo amin'ny efijery amin'ny terminal izay te-hikafika ny kaonty WhatsApp misy azy.
Ny fampiharana apetraka amin'ny fanontaniana fa mandritra ny fotoana fohy ary mandra-pialan'ny olona iray azy, izay heveriko fa tsy haharitra ela !!, Azontsika atao ny misintona azy mivantana ary tsy misoloky na baoritra avy amin'ny Play Store an'ny Google amin'ny anarana hoe CloneZap ho an'ny WhatsApp.
1 Ahoana ny fampidinana CloneZap
2 Fa manao inona ny fampiharana?
3 Miasa hitsikilo WhatsApp ve ny hackingtor?
3.2 Rgxf.de hacking-tor.com
4 Afaka mitsikilo WhatsApp ve ianao nefa tsy mametraka na inona na inona?
5 Misy azo atao ve ny mitsikilo ny WhatsApp raha tsy misy kaody QR?
6 Ahoana ny fomba hitsikilovana WhatsApp ny zanako lahy nefa tsy hitany
7 Heloka ve ny mitsikilo WhatsApp?
Ahoana ny fampidinana CloneZap
Tsy misy ao amin'ny Google Play Store i CloneZap. Na izany aza, azontsika atao ny misintona azy amin'ny magazay fampiharana Android hafa. Aptoide no fivarotana fampiharana Google tsy ofisialy malaza indrindra ary aiza raha misy izany ny fampiharana CloneZap hisintomana.
Raha tsy manana Aptoide napetraka amin'ny finday avo lenta findainao ianao dia tsy maintsy mampidina azy io alohan'ny hamoahana ny CloneZap. Amin'ny maha-fangatahana misy amin'ny fomba ofisialy antsika ao amin'ny Play Store dia ilaina izany andao hampavitrika ny safidy fiaviana tsy fantatra hahafahanao mametraka ny application avy eo.
Fa manao inona ny fampiharana?
Ny fampiharana izay natao indrindra afaka mitondra ny kaonty WhatsApp mitovy amin'ny terminal maromaro miaraka amin'izay, manararaotra ny fampiasa WhatsApp Web, Izy io dia manana rindranasa mpampiasa-drafitra fampiharana, na dia tsy dia mitovy amin'ny WhatsApp tany am-boalohany aza, dia miasa tanteraka satria afaka mifehy ny WhatsApp amin'ny terminal Android marobe miaraka amin'izay isika, eny fa na dia mahazo fampandrenesana aza nefa tsy mila fampifanarahana sy famoahana ny kaonty WhstaApp isaky ny te hanova finday avo lenta izahay.
Ny fampiharana maimaim-poana tsara indrindra hamoronana sticker amin'ny WhatsApp
Ankoatr'io fampiasa lozika io, fampiasa iray izay azontsika alaina tahaka tsotra fotsiny amin'ny tranokala napetrakao amin'ny Android amin'ny alàlan'ny fametrahana azy amin'ny maody. «Asehoy ny kinova amin'ny birao» ary miditra amin'ny pejin-tranonkala WhatsApp, CloneZap ho an'ny WhatsApp mamela antsika jereo ny fifandraisana amin'ny kaonty WhatsApp notarafina, ny chat rehetra vita ary jereo ny rakitra multimedia nalefa rehetra Afa-tsy ireo feo na feo na feo an-tsoratra, ary izany rehetra izany dia toy ny hoe ao anaty rindranasan'ny WhatsApp izahay nefa tsy mbola naneho banga taminay teo amin'ny kinova WhatsApp Web an'ny birao.
Ahoana no ilazako anao eo am-piandohan'ny lahatsoratra ary efa naneho hevitra momba ny fotoana roa aho, Ity fampiharana ity dia natao hampiasaina manokana ny kaontinay WhatsApp, fa iza no miteny amiko fa tsy vitako amin'ny kaonty WhatsApp an'ny sakaizako, ny namako akaiky indrindra na ilay olona tadiaviko.
Ny maharatsy ny fahazoana an'io mitsikilo ny WhatsApp an'ny olona tadiavinay, dia mila miditra an-tanana amin'ny kaonty WhatsApp an'ny olona tiantsika hitsikilo na hifehezana isika, izany hoe mila afaka miditra amin'ny fitaovan'ny olona tiantsika hitsikilo ny WhatsApp izy ireo, sokafy ny rindranasa WhatsApp, kitiho ny toe-javatra WhatsApp ary safidio haingana ny safidin'ny tranonkala WhatsApp handinihana ny kaody izay miseho aminay amin'ny alàlan'ny fampiharana CloneZap For Android izay napetrakay tamin'ny Android anay.
Ahoana no ahafantaranao raha misy mamaky ny hafatra WhatsApp anao ary inona no hatao momba izany
Ilaina ihany koa izany indrindra amin'ny fitsikilovana ny resaky ny zanakao raha mbola tanora izy ireo ary manana finday voalohany. Ho an'ity dia tsy maintsy ataonao download whatsapp maimaim-poana ary araho ireo dingana noresahintsika tetsy ambony. Fomba iray hifehezana ny sakaizany sy izay ifampiresahany izany, hisorohana ny olana mety hitranga amin'ny ankizy hafa izay sarotra indraindray ny mamantatra ao an-trano.
Dingana mandreraka nefa raha manana fahaiza-manao isika, amin'ny fanaraha-maso ilay olona tiantsika hitsikilo, fanaraha-maso izay tsy haharitra folo segondra akory, vao afaka hanatratra clone ny kaontinao WhatsApp amin'ny Android ary hahafahanao mitsikilo WhatsApp an'ilay olona tadiavinay hofehezina na hamitahana ny resaka ataon'izy ireo manokana fotsiny.
Raha mieritreritra ianao fa mitsikilo WhatsApp, avy amin'ny fikirakirana fampiharana dia mandehana any amin'ny WhatsAppWeb ary jereo ireo fitaovana nanokafanao ny fivoriana. Raha toa misy mampiahiahy anao dia azonao atao ny manidy azy tsy mila olana hitsikilovana.
Mazava ho azy, mba hisorohana ny olana momba ny fiainana manokana izay amporisihinay hatrany havaozy whatsapp amin'ny kinova farany misy satria ny fanavaozana tsirairay dia manolotra fanatsarana ary maro amin'izy ireo no mikendry ny fanatsarana ny filaminan'ny resatsika.
Raha mieritreritra ianao fa mety iharan'ity fampiharana ity na iray hafa, dia hazavao eto ahoana no hahafantaranao raha nipaipaika anao tamin'ny whatsapp ianao.
Miasa hitsikilo WhatsApp ve ny hackingtor?
Hackingtor dia tranonkala iray nanjary nalaza, roa taona lasa izay. Samy niresaka momba io tranonkala io daholo ny rehetra avela hiditra amin'ny kaonty WhatsApp. Hatramin'izao dia mbola miasa ihany ny pejin-tranonkala, raha ny tena izy, misy pejin-tranonkala roa samy hafa, miaraka amina sehatra iray mitovy amin'izany izay manome antoka fa afaka miditra amin'ny kaonty WhasApp isika.
Mila miditra fotsiny ny nomeraon-telefaona tiana ahazoana ireo angona isika, misafidy raha te hiditra amin'ireo lahatsoratra, horonan-tsary ary sary isika ary tsindrio ny kaonty Hack WhatsApp. Avy eo haseho ny bara fandrosoana izay mampiseho antsika ny toeran'ny hack izay voalaza fa mitranga ary hoy aho hoe satria tsy mandeha io dia tsy tena izy fa scam.
Rehefa vita ny fizotrany dia manolotra antsika izy rohy roa miaraka amin'ny tantara nofidianay tamin'io kaonty io. Ho an'ity lahatsoratra ity dia nisafidy ny hiditra amin'ny chat sy sary ary horonan-tsary aho. Mahaliana fa ny rakitra farany miaraka amin'ny angon-kaonty an'io kaonty io dia tsy misy afa-tsy 29 MB, raha tena tokony hipetraka GB maro izany. Ity no famantarana voalohany fa misy zavatra tsy mety.
Amin'ny alàlan'ny fanindriana ny iray amin'ireo rohy roa, dia mamindra ahy amin'ny pejy web iray aho, izay tokony hisoratako anarana hahafahako miditra amin'ny atiny film (famantarana faharoa). Maimaimpoana tanteraka ny serivisy, saingy Mila manome ny antsipirian'ny carte de crédit-ko aho, ao anatin'izany ny CVC izay hitanay tao ambadiky ny karatra (famantarana fahatelo).
Tokony ho tsaroana fa raha manome an'ity angona rehetra ity isika, ao anatin'izany ny CVC, izay olona mahazo izany data izany, azonao atao ny mividy amin'ny karatray Na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao.
Ny pejin-tranonkala hafa, izay ny url dia tena mitovy amin'ilay taloha, mampiseho a fisehoana matihanina kokoa. Mila miditra ny nomeraon-telefaonantsika (firenena aiza na aiza eto an-tany) isika vao manomboka ilay sarimihetsika.
Avy eo, toy ny hoe sarimihetsika mpijirika dia hanomboka mampiseho ny tsipika kaody, izay samy misy ny nomeraon-telefaona nampidirintsika, sy ny IP (niavian'izy ireo ny toerana misy anay hanehoana izany amin'ireo andalana ireo) dia aseho manaporofo ny fahamarinana.
Na izany aza, raha mijery akaiky isika, na dia tsy mahalala firy momba ny computing aza, dia hitantsika ny fomba anaovana ireo torolàlana izay tanterahina eo an-toerana, ary tsy misy adiresy https aseho. izay mety tehirizina ny angona izay heverina fa hidiranao.
Rehefa tapitra ny fizotrany, izay maharitra minitra vitsy dia aseho ny sary ambony, izay ampahafantariny antsika izany voafitaka soa aman-tsara amin'ireo isa izay notondroinay, ny isan'ny resaka ary koa ny isan'ny sary, horonan-tsary ary ny feo naoty izay azony nidirana. Haben'ny haben'ny 1.89 GB. Amin'izao fotoana izao dia toa azo itokisana ny zava-drehetra.
Raha te hiditra amin'ny angon-drakitra nosogin'ity tranonkala ity, ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia hamarino fa tsy robot izahay. Fanondroana voalohany fa misy zavatra tsy mety. Eny ary, okay, ny mahaliana antsika dia ny mahafantatra hoe hatraiza ny laharana WhatsApp nofaritanay no voajirika sa scam iray hafa. Tsindrio ny Unlock izao.
Averina indray, toy ny tamin'ny tranonkala teo aloha ihany, mitodika any amin'ny pejin-tranonkala iray izay angatahany izahay hisoratra anarana hahazoana ny katalaogin'ireo sarimihetsika atolotray antsika. Na dia afaka mizaha toetra ny serivisy mandritra ny 7 andro aza izahay dia ilaina izany andao hampiditra ny laharana feno amin'ny carte de crédit miaraka amin'ny CVC, mba hahafahan'ny serivisy manamarina izay firenena misy antsika hanomezana antsika fidirana amin'ny atiny izay misy ara-dalàna eto amin'ny firenentsika.
tanteraka tsy misy amin'ireo pejin-tranonkala, izay milaza fa mamela antsika hiditra amin'ny angon-drakitra kaonty WhatsApp hafa, dia afaka manao izany, farafaharatsiny izay rehetra hita ao amin'ny tranonkala izay matetika no zahanay.
Ho fanampin'ilay tranonkala hitanao (Google, Wikipedia ...), ilay ampiasainay isan'andro, misy koa ny Tranonkala lalina, angona avy amin'ny pejin-tranonkala izay tsy azon'ny olon-drehetra idirana (tahiry, rohy mivantana, fahazoan-dàlana hiditra) ary ny Dark Web, izay ahitantsika zavatra na serivisy heverina ho tsy ara-dalàna.
Ny Web Dark dia tsy misy afa-tsy amin'ny browser manokana (Thor no be mpampiasa indrindra) ary raha mahita olona afaka isika hack ny kaonty WhatsApp tena (misy fisolokiana maro), tsy ho mora vidy izany.
Afaka mitsikilo WhatsApp ve ianao nefa tsy mametraka na inona na inona?
Ny fomba tokana ahafahana miditra amin'ny kaonty WhatsApp an'ny olon-kafa nefa tsy mametraka rindrambaiko antoko fahatelo dia amin'ny alàlan'ny serivisy WhatsApp Web ary mampiasa browser izay ahafahantsika mameno web.whatsapp.com toy ny solosaina.
Tsy ny mpitsidika rehetra no mahavita mamitaka ny tranonkala WhatsApp ka mieritreritra fa solosaina, solosaina finday na birao io. Raha mahavita mamitaka ny tranokalan'ny WhatsApp ny mpitety anay dia hiseho ny kaody barazy, kaody bara iray izay tsy maintsy mijery amin'ny terminal izay tiantsika hiditra isika.
Misy azo atao ve ny mitsikilo ny WhatsApp raha tsy misy kaody QR?
Ny kaody QR izay aseho amin'ny tranokala whatsapp.com dia tokana sy an'ny tena manokana, izany hoe, io kaody io dia manan-kery fotsiny ho an'ny nomeraon-telefaona tianay hampiasa ny tranokala WhatsApp. Ireo kaody ireo dia novokarina ho azy ary raha vao nifandray tamin'ny nomeraon-telefaona iray izy ireo dia tsy haseho amin'ny mpampiasa hafa intsony.
Io no hany fomba fampifandraisana isa WhatsApp amin'ny serivisy WhatsApp Web. Raha tsy mandeha ny fakantsarin'ny finday avo lenta dia tsy ho afaka hiditra amin'ity serivisy web ity ianao mandra-panovanao ny terminal. Mamaly ny fanontaniana ato amin'ity fizarana ity: Misy azo atao ve ny mitsikilo ny WhatsApp raha tsy misy kaody QR?. TSIA ny valiny, tsy azo atao izany, ary mandainga izay milaza fa mahavita azy.
Ahoana ny fomba hitsikilovana WhatsApp ny zanako lahy nefa tsy hitany
Araka ny efa nanamarihako tamin'ny fizarana teo aloha, ny hany fomba ahafahana miditra kaonty WhatsApp dia amin'ny alàlan'ny WhatsApp Web. Tsy misy fomba hafa hidirana. Tsy misy fampiharana mamela antsika hanao azy anio (amin'ny kinova Android taloha raha azo atao).
Ny fomba tokana hidirana amin'ny resaka WhatsApp an'ny zanakao dia mampiasa WhatsApp Web, mivantana avy amin'ny solosaina na avy amin'ny finday avo lenta mampiasa browser izay ahafahanao mameno ny tranokala WhatsApp aseho ny kaody QR amin'ny endrika biraonao.
Mazava ho azy, ity fomba ity dia hiasa mandra-pijerin'ny zanakay lahy azy rehetra Fotoam-pivoriana WhatsApp azonao atao misokatra amin'ny solosaina hafa. Raha manidy ny fotoam-pivoriana rehetra tsy fantatrao ianao dia hijanona tsy hanana fidirana amin'ny resaka WhatsApp an'ny zanakay rehetra izahay.
Heloka ve ny mitsikilo WhatsApp?
Ny fitsikilovana ny resadresaka WhatsApp an'ny olona iray hafa, na inona na inona fari-piainan'ny mpianakavy, hoy ny lahatsoratra 197 amin'ny Fehezan-dalàna famaizana Espaniola, dia fanitsakitsahana ny fiainana manokana, ka alohan'ny hitsikilovana ny kaonty WhatsApp an'ny olom-pantatrao dia tokony hieritreritra indroa ianao, satria mety hahazo sazy an-tranomaizina ianao.
Raha momba ny zanatsika izany, miova ny zavatra, satria, miankina amin'ny taonan'ny zaza tsy ampy taona, ny fahatakarana antonony dia azon'ny roa tonta, raha toa ka samy vonona ny hanome ny tanany hamily.
Na dia tsy izany aza no izy dia tsy maintsy tadidintsika fa ny zaza tsy ampy taona dia voaro amin'ny alàlan'ny zon'ny fiainana manokana ny andininy faha-18 amin'ny lalàm-panorenana Espaniôla. Na izany aza, ny jurisprudence dia manamarina ny fitsikilovana solosaina (hiantsoana azy amin'ny fomba mazava) amin'ireo zanatsika mba arovy izy ireo hiaro sy hitahiry ny maha-akaiky azy sy ny fiainany manokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » fiarovana » Ahoana ny fomba hitsikilovana WhatsApp na hitazomana ireo kaonty mitovy amin'ny terminal roa samy hafa
Advanced dia hoy izy:
Tiako ny mampahatsiahy anao fa araka ny andininy faha-18.3 amin'ny lalàm-panorenana, "Ny tsiambaratelon'ny serasera ary indrindra ny hafatra amin'ny paositra, telegrafika ary telefaona dia azo antoka, afa-tsy amin'ny didim-pitsarana." manitsakitsaka izany zony izany ary misy fiantraikany amin'ny heloka bevava, noho izany dia zavatra tena lehibe tsy tokony havoaka ampahibemaso toy ny natao tamin'ity lahatsoratra ity.
Salama e. Lahatsoratra tena ilaina io. Afa-tsy zavatra iray tsy azoko. Novakiako izy, novakiako indray ary tsy azoko an-tsaina hoe nilaza ny mpanoratra an'ity lahatsoratra ity fa afaka mitsikilo izay tiantsika isika.
Ole, misaotra anao nanasazy ny fiainanao manokana. Azonao natao ny nanakaiky ilay lahatsoratra ho fitsikerana, izay no eritreretiko rehetra amintsika mamaky ity bilaogy ity.
Tianay ny teknolojia sy ny android. Fa tsy ny tsy ara-dalàna ary mampiroborobo azy ireo.
Iza no mpandrindra an'ity bilaogy ity? Sa ny sefon'ny tonian-dahatsoratra? Tsy dinihina ve ireo hevitra?
NY RENIKO !!!!!
Izaho dia mpandrindra ny Androidsis ary tsy hitako ny tantara ratsy tianao homena an'ity lahatsoratra ity, izay anazavana sy manasongadina fa natao ho an'ny tena manokana ary na dia afaka mitsikilo aza ianao, izay araka ny nolazaiko fa tsy tokony Ataovy satria ara-moraly dia azo tsinontsinoavina toy ny tsy ara-dalàna, izany dia arakaraky ny fari-pitondrantenan'ny tsirairay.
Miarahaba anao ary misaotra amin'ny hevitrao.
Faly aho fa tsy fantatro fa ianao no mpandrindra. Ankehitriny dia mahatakatra zavatra maro hafa aho.
Lojika raha tsy mahita olana be ianao raha tsy izany, azoko tsara fa tsy namoaka azy ianao. Miery ao ambadiky ny fitsipi-pitondrantenan'ny olona ianao kanefa manazava amin'ny antsipiriany ny fomba fanaovana azy. Izany dia toy ny hoe "Ianaro ny heloka lavorary" ary avy eo ianao milaza fa ao anatin'ny etikao daholo izany.
Tsy tokony hametraka zavatra toa ny fitsikilovana ny hafatry ny sakaizanao na sakaizanao akaiky ianao raha tsy hitan'izy ireo izany, satria heloka bevava io, fotoana.
Tsy haiko ny tianao holazaina amin'ny fampiasana manokana. Heverinao koa fa ny lohan'ny orinasa iray dia afaka mampiasa izany amin'ny mpiasan'ny asany?
Ary rahoviana, ao amin'ny lahatsoratra dia miresaka momba ny fitondran-tena fotsiny ianao fa tsy amin'ny LALANA.
Inona no lazainao momba «ny zavatra tena mandreraka dia ny fidiranao amin'ny tanana na dia tsy hitondra anao mihoatra ny 10 segondra aza ...»
Ary hitanao fa tsy misy olana …….
Mamerina ny tenako aho ary manazava, ity fampiharana ity dia natao ho an'ny fampiasana manokana izay tsy midika hoe mihoatra ny fahafahany mitondra ny WhatsApp-nao amin'ny finday roa amin'ny fotoana iray nefa tsy mila manamarina ny tatatra ary mampihetsika sy manafoana kaonty iray hafa isaky ny miova ianao finday. Ny azavaiko ao amin'ilay horonantsary dia toy ny hoe miala eo ambony latabatra eo amin'ny latabatra ny sipanao na ny sakaizanao na ny namanao akaiky ary azonao atao ny manararaotra izany hanapahana ny WhatsApp-ny, izay tsy ankasitrahako ary tsy hitako mihitsy izany. ataovy, toy izany ihany koa no mamela an'ity fampiharana ity afaka folo segondra.
Tsy mankasitraka aho na hanohitra ny fampiharana, ny fanazavàna azoko omena antsika fotsiny no azavaiko ary ny andraikitra dia efa eo amin'ny kaontin'ny tsirairay sy ny fitondran-tenany manokana.
Misy ihany koa ny fitaovam-piadiana mitahiry fitaovam-piadiana isan-karazany ary noho izany dia tsy mila manolo-tena hamono olona eny ianao, na amin'ny andian-tantara amin'ny televiziona sy ny sarimihetsika dia mampianatra anao isan'andro izy ireo hanao ilay heloka lavorary ary tsy midika izany fa mitaona antsika izy ireo manao heloka. Averiko ihany izany fa mifanaraka amin'ny fitsipiky ny tsirairay sy ny fitondran-tenany.
Izaho manokana dia tsy mankasitraka karazana fitsikilovana na fampahafantarana ny fiainam-piainan'ny olona manokana ary manohitra ny fampiasana ny fampiharana ho an'ireo tanjona ireo aho.
Ampahatsiahiviko anao rehetra fa ny lalàna dia mamela ny ray aman-dreny koa hanara-maso ny fifandraisan'ny zanany tsy ampy taona. Misy ny didim-pitsarana avo indrindra manohana azy.
Ny saina miolakolaka ihany no esorina amin'ny lahatsoratra manazava ny fomba fanaovana zavatra ary tompon'andraikitra amin'ny fampiasana manokana ny tsirairay. Izany hatsaram-panahy izany dia manantona ahy amin'ny sasany izay mihevitra fa ny fampanginana ny Internet dia hampitsahatra ny asan-dahalo eto amin'izao tontolo izao.
Tahaka ny fitsikerana na koa ny fanentanana ny fanakatonana ny Facebook satria mpamono olona sy mpampihorohoro maro no mampiasa azy io hifandraisana sy hananganana baomba mamono tena.
Very ny avaratra ary manao sorona ny tenanay izahay.
Tena tiako ilay lahatsoratra ary azoko antoka fa azoko atao ny manakana ny zanako tsy hianjera amin'ny zava-mahadomelina na ratsy kokoa. Mazava ho azy fa holazaiko aminao fa ho hitako izay ataonao rehetra amin'ny WhatsApp, satria miaro ahy ny lalàna.
Mamaly an'i UnPadre
Salama, mandra-pahoviana no ahafahanao manana izany fampiharana izany, izany hoe ny wathsaap voatondron'ilay olon-kafa? misy fe-potoana ve? sa tokony hanavao hatrany isika?
Mamaly an'i daiana
paoma hazo dia hoy izy:
Tsara ny tolakandro fa misy fampiharana ho an'ny iPhone.
Mamaly an'i meli
Jose Antonio Juarez Cruz dia hoy izy:
Tsy hitako izay anton'ilay tantara ratsy. Zokiolona isika ary samy mahafantatra ny tsirairay na mahavita izany izy na tsia.
Ankoatr'izay, izany rehetra izany dia miankina amin'ny fomba fijery izay ahitana ny raharaha. Tena ilaina izany, satria noho io fampahalalana io dia afaka ampahafantarina bebe kokoa antsika ny fomba ahafahana manangona klona ny tambajotran-tseraserantsika na ireo havantsika isika !!!!
Mampihatra ny fahalalahanao maneho hevitra voarakitra ao amin'ny Lalàm-panorenana koa ianao !!!!
Valiny tamin'i Jose Antonio Juarez Cruz
MANKASITRAKA FRANCISCO !!!
Selvin dia hoy izy:
Salama, avy any Goatemalà aho fa te-hisintona azy saingy tsy miseho ary izany no antony hitrangan'izany na misy fampiharana hafa fantatrao, misaotra anao, miandry ny valinteninao aho,
Valiny tamin'i Selvin
Tania ramos dia hoy izy:
Salama aho efa nanandrana nampidina ny rindranasa clonezap tao amin'ny magazay kilalao fa ny santionany dia tsy milaza intsony hoe tsy voasoratra anarana amin'izay ahafahako misintona azy. Gracoas
Mamaly an'i Tania ramos
Paola Cincunegui dia hoy izy:
Tsy afaka misintona aho ???
Valiny tamin'i Paola Cincunegui
Coderdeath dia hoy izy:
Andao ry tompokolahy, mitovy ihany izany raha misy mampiasa io fampiharana io amin'ny "fomba diso" (morale); toy izay hiditra amin'ny fiara mitady olona hitsoaka eny an-dalambe ... miankina aminao ny zava-drehetra, ny fomba fampiasanao azy sy / na ny mety hahatonga anao hitarika azy io.
Mamaly an'i Coderdeath
ny fampiharana tsy mamela ny misintona audios ??? Ary raha mila misintona ny audio an'io chat manokana io aho, ahoana no anaovana azy ??????
Mia dia hoy izy:
Raha ny hevitro, WhatsApp tsy izy no fampiharana azo antoka indrindra. Noho izany, raha vantany vao nanomboka nampiasa azy io ho an'ny asa aho dia nametraka mSpy avy hatrany mba hahazoana antoka ny fiarovana ny angon-drakitra sy ny fidirana amin'ny kaontiko amin'ny fitaovana rehetra.
Mamaly an'i Mia
theanikilator dia hoy izy:
Tsy misy intsony i Clonezap na miova anarana?
Mamaly an'i theanikilares
Salama, misy ny fampiharana Clonezap, azonao atao amin'ny lisitra Android izany.
Mpihazakazaka Liria dia hoy izy:
Salama Francisco, ianao?
Valiny ho an'ny mpihazakazaka Liria
Motocross ivelany sy hazakazaka enduro amin'ny Dirt Bike Unchained
Ny vaovao manandanja indrindra an'ny Android 3 Developer Preview 11